Archive du 28-oct-2020
500Ar dia manja sy tsara volo
Karazana maska natoraly 6 raha kely indrindra no azo atao aminny manga, mba hahamanja anao.
Fromage fondu, amboarina ao an-trano
kora ilaina · Ronono 1,5 litatra · Ranom-boasarimakirana 3 sf · Vovo-dronono 30 g · Dibera 50 g · Sira 2 tsongo · Ranony avy nanafihazana ny ronono 2 sf
Jus frezy sy betiravy
ho anny tsy ampy fer!
Ankoatra ny épinard dia legioma iray tena ahitana fer betsaka ihany koa ny betiravy. Afaka andrahoana izy ireny ary azoh atao zava-pisotro toy ity entina aminao anio ity.
Tokony hatao tanjona ve ny fanambadiana sa lalam-piainana ihany ?
Vonjy Razafitsifa : Ny ahy aloha tsy tanjoko ilay izy fa lalam-piainana. Tahaka ny hoe :te ho any Tamatave aho dia tsy maintsy mandalo ani Moramanga. Misy kosa vehivavy manana « destination » hafa dia làlana tsy misy fanambadiana no alehany, tahaka ny masera ohatra.
Nisaraka izaho sy ilay olon-tiako, satria nilaza izy fa tsy afaka ny hiteraka amiko, noho ny olany manokana.
Izy anefa tia ahy. Efa miaraka aminolon-kafa aho izao, nefa tsy mety adinoko izy io. Izaho koa anefa te hiteraka. Inona no ataoko ?
Misotro rano mafana : Tena mamono Covid-19 ve?
Mbola misy ny Covid-19. Taminny alahady teo ohatra dia 158 ireo voa vaovao ary 6 ireo nodimandry.
Tokony hamela azy foana ve raha mampirafy izy ?
Toky Rathia, coiffeur visagiste  maquilleur professionnel : Amiko manokana dia tsy misy ny olona tonga lafatra.
TANORA WIM MADA Mampiavaka ny vehivavy ny rallye
Ireo tanora ao anatinny WIM Mada na ny Women In Motorsport eto Madagasikara indray no entina aminao anio.
Ireo tsiambaratelo 5 ani Melania Trump
Nankalaza ny faha 48 taonany taminny alakamisy lasa teo i Mélania Trump, vadinny filoham-pirenena amerikanina Donald Trump.
Shopping « vita Malagasy »
1. Sac en raphia et cuir Page Facebook Vakanà Design - Contact : 032 43 695 83 2. Sac en raphia noir avec fermoir en boucle - Page Facebook Vakanà Design - Contact : 032 43 695 83
Ronono + tantely : Mampitombo hery fiarovana
Ankoatra ny fampitoniana ny aretin-tenda sy ny ady aminny tsy fahitana torimaso dia manatsara ny fahasalamana ihany koa ny ronono hampiarahina aminny tantely. Jereo anie ireto vokatsoa entiny ireto e!
EPP ANTANIMBARINANDRIANA Nomena kits scolaires sy aronakanjo ny mpianatra
Toy ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny Nosy dia niverina an-tsekoly nanomboka ny Alatsinainy 26 Oktobra ihany koa ireo mpianatra miisa 822 manovo fahalalana eo anivonny EPP Antanimbarinandriana,
Hetsika Otitsara: hanentana ny Lisea Arivonimamo mahakasika ny fiainam-pananahana
Misy ny atrikasa izay ho tanterahinny Hetsika Otitsara na Orimbatonny tontolo iainana TsaraRindra ho anireo ankizy mpianatra ao aminny Lisea Arivonimamo.
NAOTY TAMINNY BACC Ny taranja Malagasy no tsy nahitana olana firy
Efa ao anatinny fitsarana ny taratasim-panadinana Bakalorea tanteraka ireo mpampianatra mandray an-tanana izany ankehitriny. Raha araka ny fanadihadiana natao dia ny taranja Malagasy no tsy nahitana olana firy.
FILAHARAN-DRANO ENY IVATO Manomboka aminny 12 ora alina
Tena mijaly rano fisotro madio ny mponina eny Ivato na dia izy aza no vavahadinAntananarivo mifandray aminireo tanana manodidina. Mifoha aminny 12 ora alina isanandro mantsy ny mponina mandeha milaha-drano eny aminny paompy.
Eleves officiers dActives Mavitrika ireo vehivavy
Miditra eo aminny herinandro faharoa aminny fanaovana andranasa aminny FUMACO na ny Fusiliers Marins Commandos ireo mpianatra ho « officiers » eo anivonny ACMIL ao Antsirabe aminizao fotoana izao.
Fisorohana ny fihibohana faharoa 400 ireo nosaziana
tsy nanao aron-tava!
Migoragora tanteraka aminizao fotoana ny tsy fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny fiparitahanny valanaretina Covid-19 eto amintsika taorianny fanafoana ny hamehana ara-pahasalamana.
"Akany Enfants de Joie" Ankizy 400 nahazo kojakojam-pianarana
Mpianatra miisa 400 ao aminny "Akany Enfants de Joie" ao Andranomadio Toamasina no nisitraka kojakojam-pianarana, boky fianarana isan-karazany, ary vata fahitalavitra avy aminny antoko Freedom ny alatsinainy teo.
Ampandrianomby Lehilahy nanendaka sy nanao valifaty
Voasambotry ny mpitandro filaminana avy ao aminny boriborintany fahatelo ny lehilahy iray ny faranny herinandro teo.
Fahamaizanny Chef CSB II Manitseva, SDSP Amboasary Atsimo Noraisinny Minisiteranny Fahasalamam-bahoaka ny fitsaboana rehetra
Manoloana ny fahamaizana nahazo ny lehibenny CSB II ao Manitseva, SDSP Amboasary Atsimo, DRSP Anosy, dia tonga nitsidika sy nampahery ary nivatsy solon-dranom-boankazo